Ny lahatsoratr'i Jim Berryhill momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Jim Berryhill
Fotoana lehibe ny fanidiana fivarotana. Io rehefa afaka mankalaza ny asa rehetra nahatonga ny mpanjifa vaovao ianao. Io no nanolorana ny ezaky ny olonao rehetra sy ny CRM ary ny fitaovanao MarTech. Io dia champagne pop-the-champagne ary miaina fofonaina. Vao fanombohana ihany koa io. Ekipa marketing ho an'ny fandrosoana mialoha dia mandray fomba fitantanana mitohy amin'ny dian'ny mpanjifa. Fa ny fialan-tanana eo anelanelan'ny fitaovana nentim-paharazana dia afaka miala